Tun Tun's Photo Diary: Langkawi Trip, Arrival #1
14-Aug-2012 နေ.က Singapore Changi Airport ကို မနက်ပိုင်း ရောက်သွားတယ်။ Langkawi ကို Airasia လေယာဉ်နဲ. သွားဖို.ပါ။ လေယာဉ်ချိန်က မနက် ၁၀နာရီလောက် ထင်တယ်။ ဒီခရီးစဉ် မှာ ကင်မရာ ၂လုံး ပါသွားတယ်။ တစ်လုံးက Canon 550D နဲ. Tamron28-75mm F2.8 Lens နဲ. Zoom Camera Nikon P510 ပါသွားတယ်။
Nikon P510 က အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ Zoom အများဆုံးဆွဲလို.ရတဲ့ ကင်မရာပါ။ 42x optical zoom ကိုသဘောကျလို. ခရီးမတိုင်ခင်ဝယ်လိုက်တာ။ အခုတော့ 60x ထိ ဆွဲလို.ရတဲ့ ကင်မရာတွေ ပေါ်နေပါပြီ။ ဒီခရီးစဉ်က ပုံတွေတော်တော်များက ဒီ Nikon ကင်မရာနဲ. ရိုက်ဖြစ်တာများတယ်။ Compact camera ဆိုတော့ DSLR နဲ. ယှဉ်ရင် ပုံထွက်က သိပ်ပြီး မမိုက်ဘူး။ အပျော်သဘောမျိုး ရိုက်ရုံလောက်ပဲ ကောင်းတယ်။
Flight taking off from Changi Airport
Zoom အဝေးကြီးဆွဲလို.ရတယ် ဆိုတော့ လူကသိပ်ပြီး ရွေ.စရာမလိုဘူးလေ။ Zoom လေးကိုပဲ ကစားပေးရုံပဲ။ DSLR crop sensor နဲ. ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေနဲ. ယှဉ်လိုက်ရင် image sensor ကသေးတော့ ပုံတွေက ကြည့်ရတာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ပုံတွေက ကြွ မနေပဲ အရမ်းကို Flat ဖြစ်နေသလို ခံစားရတယ်။ အလွယ်ပြောရရင် ဖုန်းကင်မရာက ထွက်တဲ့ ပုံထက် နည်းနည်းပိုကောင်းရုံလေးပဲ။
လေယာဉ်ဆိုက်ခါနီးမှာ အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အပြာရောင် ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို တွေ.ရပါတယ်။ အရင် Phuket သွားတုန်းက မြင်ခဲ့ သလိုရူခင်းမျိုး။ အမှန်တော့ Langkawi နဲ. Phuket က သိပ်မဝေးဘူးလေ။ ကမ္ဘာ မြေပုံကို ကြည့်ရင် အပေါ်က မြန်မာပြည်က မြိတ်ကျွန်းစု၊ ပြီးတော့ ထိုင်းက Phuket ၊ ပြီးတော့ မလေးရှား က Langkawi တဆက်တည်းလေ။
Langkawi က လေဆိပ်ကို နေ.လည် ၁၂ခွဲလောက် ဆိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်က ရာသီဥတု အရမ်းပူတယ်။ တည်းဖို.အတွက် Agoda ကနေ Sweet Inn Motel ကို Booking လုပ်ထားတယ်။ ဒီမိုတယ် က ၂ယောက်ခန်း တခန်းမှ တစ်ညကို S$30 လောက်ပဲပေးရတာ။ Breakfast လဲပါတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို တန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့လို Budget traveler တွေ အတွက် အသင့်လျှော်ဆုံး နေရာပါ။ နောက်ပြီး ကမ်းခြေနဲ.လည်း သိပ်မဝေးပါဘူး။ ၁၀ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်လိုက်ရင် ကမ်းခြေကို ရောက်ပါတယ်။ Booking လုပ်တုန်းက ဟိုတယ်ကို လေဆိပ်လာကြို တဲ့ service ကို request လုပ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လေယာဉ်ဆိုက်တော့ လာကြိုတာ မတွေ.တာနဲ. ဖုန်းဆက် ကြည့်လိုက်တော့ ကနေ. လူပိုမရှိလို. လာမကြိုနိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ.ပဲ ကိုယ့်ဖာသာ Taxi ငှားပြီး hotel ကိုသွားခဲ့ရပါတယ်။ လေဆိပ် ၀န်ထမ်းကလဲ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ နဲ. ဖုန်းအလကား ပေးဆက်ပါတယ်။
လေဆိပ်က ဟိုတယ်နဲ. သိပ်မဝေးပါဘူး။ ဟိုတယ်မှာ Check-in လုပ်ပြီး နေ.လည်စာ မစားခင် ကမ်းခြေဘက်ကို အရင် သွားကြည့်တယ်။ နေ.လည်ဆိုတော့ ပင်လယ်မှာ လူတော်တော်ရှင်းပါတယ်။
ကမ်းခြေမှာ ဓါတ်ပုံခဏရိုက်ပြီးတော့ နေ.လည်စာ စားဖို.ရှာရပါတယ်။ အချိန်က ညနေ ၃နာရီလောက်ဆိုတော့ ဆိုင်တွေတော်တော်များများက ပိတ်နေပြီ။ တော်တော်များများက ညမှ ဖွင့်မယ့် ဆိုင်တွေပါ။
ညနေ ၃နာရီလောက်မှာ ရွေးစရာ မရှိတာနဲ. တွေ.တဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်မှာ ၀င်စားလိုက်တယ်။ စားသောက်နေတုန်း Taxi ဆရာတွေက ဘယ်သွားချင်လဲ၊ ဘယ်လိုက်ပို.ပေးရမလဲ လာလာမေးပါတယ်။ ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်းနဲ. ကားငှားဖို. ပြောထားတော့ ဘယ်မှ မသွားဆိုပြီး ငြင်းလိုက်တယ်။ စားပြီး ရင် ဟိုတယ်ပြန်မယ်။ ပြီးရင် ကျန်တဲ့ ညနေပိုင်းကို Underwater World နဲ. Black Sand Beach သွားဖို. ရှိတယ်။ ဟိုတယ်က ငှားပေးတဲ့ Taxi နဲ. သွားမှာပါ။ နောက်ပို.စ်မှာ ဆက်ရေးပါမယ်။
at 3/13/2015 03:05:00 AM